Inuu Bogaadinayo Kante & Hazard, Labada Kooxood Ee Shaqada Fiican Qabtay, Halista Lukaku & Antonio Conte Oo Ka Hadlay - Wargane News
Home Sports Inuu Bogaadinayo Kante & Hazard, Labada Kooxood Ee Shaqada Fiican Qabtay, Halista...
Tababare Antonio Conte ayaa aaminsan in weeraryahanka Everton Romelu Lukaku uu qatar ku yahay tartanka ay ugu jiraan horyaalka, balse wuxuu ka dhawaajiyay inuussan ku badalan doonin weeraryahankiisa reer Spain Diego Costa.
Lukaku oo isaga tagay Chelsea kadib markii uu waqtiyo amaah ah ku qaatay kooxaha West Brom iyo Everton ka hor inta uusan si rasmi ah ugu wareegin kooxda ka dhisan gobolka Merseyside.
Weeraryahanka reer Belgium ayaa hogaaminaya gooldhalinta horyaalka Premier League kadib markii uu 24-gool shabaqa ku hubsaday, waana in ka badan shan gool tirada goolasha uu dhaliyay Diego Costa.
Diego Costa ayaa soo afjaray abaar baahsan oo muddo hareysay wuxuuna shabaqa soo taabtay kulankii ay kooxdiisa 4-2 kaga adkaadeen Southampton, sidoo kalana waxaa jira warar Lukaku la xiriirinaya inuu dib ugu soo laabto meeshana kama marna in xidigii hore Atletico Madrid lala xiririinayo horyaalka Shiinaha.
“Sidaan hubo, waxey ila tahay in Lukaku yahay ciyaariyahan wanaagsan” Ayuu yiri Conte oo ka hadlaya shirka jaraa’id ee ka hor kulanka ay Goodison Park ugu martin noqon doonaan Everton.
“Wuxuu dhaliyay goolal badan xili ciyaareedkaan, balse kaliya maahan xili ciyaareedkaan”
“Waa inaan dareen xoog leh siino [Lukaku], balse mar walba waa isku mid. Waan baranay kuwa naga soo horjeeda waxaana isku dayi doonaa inaan xalka ugu fiican u helno si aan u joojino, mid mid iyo guud ahaan kooxdaba”
“Waa inaan dareen xoog leh siino Lukaku iyo ciyaartoyda kale. Waxey heystaan ciyaartoy badan oo fiican, kuwaas oo leh farsamo fiican iyo dhameystir fiican”
Antonio Conte ayaa la weydiiyay hadii uu dalab ka gudbinayo Romelu Lukaku wuxuuna ku jawaabay: “Kooxdeyda? sida aan horay u iri, aniga ahaan ciyaartoydeyda ayaa ah kuwa ugu wanaagsan dunida. ma doonayo inaan u badalo ciyaartoydeeda kuwa kale”
Dhanka kale Antonio Conte ayaa amaan balaaran usoo jeeidyay ciyaartoydiisa darajada wanaagsan ka heshay abaalmarinta PFA, Kante oo noqday xiddiga ugu sareeya iyo Hazard oo helay codadka labaad ee ugu badan.
“Marka la joogo xaaladaan, waxaan doorbidayaa inaan helo codadka 23-ka xidig, una codeeyo mid walba oo ka mid ah ciyaartoydeyda, waan hubaa” ayuu yiri tababarahii hore Juventus.
“Balse sidey ila tahay tani Kante waxey u tahay abaalmarin weyn sidoo kale Hazard. waxeyna qaateen xilli ciyaareed fiican”
“Sidoo kale ciyaartoydeyda Chelsea wey u qalmaan iney ka mid noqdaan kooxdaas, si ay isugu dayaan iney ku guuleystaan xiddiga ugu fiican sanadka”
Intaas waxaa sii dheer in macalinka sadexda jeer ku guuleystay Serie A-da uu ka dhawaajiyay in kaliya laba kooxood ay wax fiican sameeyeen xili ciyaareedkaan.
“Marka la joogo horyaalkaan, laba kooxood ayaa xili ciyaareed weyn heysta, Chelsea xilli ciyaareed fiican ayey heysataa balse sidoo kale Spurs”
“Kadib shaqo badan, waa muhiim inaad soo gaarto dhamaadka xili ciyaareedka adigoo u dagaalamaya wax muhiim ah, anaga ahaan, waxey noo tahay wax weyn inaan u dagaalano horyaalka iyo FA Cup, sababtoo ah waxaan joognaa Final”
Sporting Gijon vs Real Madrid Zinedine Zidane Ma Sii Xoojin Doona Lugta Caawe Misa Wuu Dayici Doona?